Barcelona iyo PSG oo hoggaaminaya Kooxaha la la xiriirinayo laacibka Arsenal ee Matteo Guendouzi – Gool FM
(London) 27 Juun 2020. Xiddiga khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Arsenal ee Matteo Guendouzi ayaa la la xiriirinayaa qaar ka mid ah kooxaha ugu badan qaaradda Yurub, waxaana la rajeynayaa inuu isaga hayaamo garoonka Emirates.
21-sano jirkaan ayaa laga reebay safkii Gunners ee guusha ka gaaray kooxda Southampton kaddib markii kulankii toddobaadkii hore ay la ciyaareen kooxda Brighton & Hove Albion uu luqunta ku dhagay weeraryahanka lagu magacaabo Neal Maupay.
Kooxaha kala ah; Atletico Madrid, Barcelona, Inter Milan iyo Paris Saint-Germain ayaa lagu soo warramayaa inay la xiriireen Guendouzi si ay ugu dhaqaaqaan saxiixiisa xagaagan marka uu suuqa kala iibsiga furmo sida laga soo xiganayo TF1.
Laacibka reer France ayaa Arsenal ku soo biiray xagaagii 2018, xilligaas oo ay kooxda reer England lacag dhan 7.2 milyan oo gini kaga soo qaadatay naadiga Lorient.
Macallin Maurizio Sarri oo si cad kaga hadlay xilliga uu Miralem Pjanić ka tagayo Kooxda Juventus